Ireo mofomamy voaravaka toy ny hoe miaraka amin'ny kofehy Vigil | Famoronana an-tserasera
Ary ireo mofomamy voaravaka toa namboarina tamin'ny fanjaitra sy kofehy
Leslie Vigil dia mitondra antsika iray amin'ireo hevitra mamorona indrindra efa hitantsika tato anatin'ny taona vitsy lasa. Ny mofomamy sasany voaravaka toy ny hoe voatenona amin'ny fanjaitra sy kofehy. Ny marina dia amin'ny fomba fiasa voalohany ataontsika amin'ireo mofomamy ireo dia misavoritaka isika.
Amin'ny lafiny iray tsy haintsika raha tena mofomamy izy ireo ho an'io kofehy io ho haingon-trano ary ho an'ny iray hafa, rehefa mahatsikaritra fa tsy kofehy io, fa ny artista dia nahavita namorona an'io fahatsapana io tamin'ny eritreriny lehibe. Izay mitarika azy io hamakivaky ireo andalana ireo ary izao dia tehaka amin'ny tambajotra sosialy noho ny maha-izy azy.
Leslie Vigil dia mpanakanto mofomamy ary izany tato ho ato fanangonana antsoina hoe «Tapestry Cakes» dia nahazo tehaka avy amin'ny maro tamin'ny famoronana ilay firafitra toa ny mpanjaitra iray izay naka fanjaitra sy kofehy handravahana azy.
Ny marina dia tsy maintsy manakaiky isika dieny izao mahatsapa ny fahaizan'i Vigil miaraka amin'ny mofomamy miavaka amin'ny lokony lehibe sy ireo voninkazo izay mampiavaka azy ireo.
Ny iray amin'izy ireo dia singa miavaka izay mety ho ny hevitra tsara indrindra ho an'ny mofomamy fitsingerenan'ny andro nahaterahana manaraka inona izao no hataonao. Na dia efa afaka milaza aminao aza izahay fa mila fahaizana lehibe ianao. Ny zavatra tsara indrindra dia ny mitady namana mofomamy misy zavakanto ho an'ny haingon-trano ary mitady fomba iray hanahaka ny drafitry ny haingo.
Ianao dia manana Instagram's Leslie for mahita mofomamy voaravaka kokoa ianao ary ny fomba nahaizany namorona ilay firafitra manokana mampiavaka azy ireo. Ary mifandraika amin'ny kofehy, ary amin'ity indray mitoraka ity dia tena izy, fa volamena, mandehana amin'ity fidirana ity hijerena ny talenta lehiben'ity mpanakanto ity sy io teknika japoney razambe io amin'ny antsipiriany lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ary ireo mofomamy voaravaka toa namboarina tamin'ny fanjaitra sy kofehy
Ity no endrika vaovao amin'ny marika Android
Na ny biby fiompinao aza tsy mila fikarakarana betsaka toy ny Apple Card izay namboarina tsara